Axad 17 October 2021
Wakaaladaha wararka ee AP iyo Reuters oo soo xiganaya warbaahinta dalka Britian ayaa maanta shaaca ka qaaday heybta wiilka Somali-British-ka ah ee loo heysto dilka mudanaha u dhashay Britian.
Macluumaad ay idaacadda VOA ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in kadib xadaynta ay Maxkamadda ICJ ka samaysay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya ay inta badan xirmooyinka la tuhunsan yahay inay ku jiraan shidaalka iyo khayraad kale ay marayaan dhinaca Soomaaliya ee xuduudda cusub.
Rooble oo shaaciyey in la billaabayo doorashada Aqalka Hoose
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xusene Rooble ayaa sheegaya inay dhowaan billaaban doonto doorashada Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Muuse Biixi oo markii ugu horreysay ka hadlay raafkii Laascaanood
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dadkii laga saaray magaalada Laascanood isagoo eedeyn u jeediyey Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsaan isku dubbaridka gargaarka bani’aadminnimada ee OCHA.
Jaamacadda Carabta oo soo dhaweysay go'aankii Maxkamadda ICJ
War-murtiyeed ka soobaxay shirka Baarlamaanka Jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweeyay go'aankii Maxkamadda Caddaaladda ee ICJ, kaas oo Soomaaliya loogu xukumay dhul-badeedkii ay Kenya ku muransanaayeen sanado badan.
Koonfur Galbeed oo dhul-beereed siineysa dadkii laga soo masaafuriyay Laascaanood
Masuuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in dadkii laga soo barakicyey magaalda Laascaanood ay ugu deeqayaan dhul-beereed ay tabcadaan.
Warbixin ku saabsan bandhigga Buugga Nabadda Gaalkacyo
Kulan ay soo qabanqaabiyeen dhaliyarada magaaladda Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa looga hadlay amniga magaaladasi, waxaana loogu magacdarey Buugga Nabadda ee Gaalkacyo, iyada oo dadkii kasoo qeybgalay ka mid ahaa dhlinyaro ka kala socotey laba maamul ee magalaadaasi ee Galmudug iyo Puntland.
QM: 7,250 qof ayay gaareysaa tirada dadka laga saaray Laascaanood
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dadka laga barakiciyay magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda ay haatan gaareen 7,250 qof. Dhinaca kalena, maamulka degmada Laascaanood ayaa soo saaray amarro cusub oo dhinaca amniga ah.
Qarax xooggan ayaa goordhoweyd ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wararka laga helayo magaalada ayaa sheegaya in qaraxa lala beegsaday maqaaxi u dhow saldhigga booliiska magaalada. Wararku waxay sheegayaan inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac...
WASHINGTON D.C. — Ku soo dhowaada Barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka, waxaana soo diyaariyey, soona jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal (Samakaab).
Hay'adda QM oo ka hadashay dadka laga soo saaray Laascaanood iyo Ceerigaabo
Sida uu sheegay xafiiskaasi, magaalada Ceerigaaba waxa iyadana kasoo barakacay 75 qof oo soo gaaray Gaalkacayo iyo Baydhaba kadib markii sida la sheegay mas’uuliyiinta degaanku ay u qabteen in dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya ay ku baxaan ilaa 21-ka Oktoobar, sida lagu qoray warbixnta OCHA